Okulandelayo | Izifundo eziku-inthanethi
Ikhaya / Izifundo Online
Ukuhlanganisa ikusasa locwaningo lomsebenzi ngamasu asebenzayo futhi alula ukusebenzisa. Izinketho zethu zenkambo eku-inthanethi zifaka isifundo sokuzilungiselela noma ukuxhaswa komqeqeshi ngempumelelo kanye nokwenza umsebenzi wokuziphendulela.
Amakhono Amasha Ayadingeka Abasebenzi Ukuyila
Siphila futhi sisebenza ngezikhathi ezingakaze zibonwe ngaphambili. Ubhubhane luguqule impilo kanye nebhizinisi kuze kube phakade. Ungaba kanjani onqenqemeni lokushintsho nokuphazamiseka kule nkathi entsha? Ikusasa lifuna abantu ngamunye babe nobuciko futhi benze izinto ezintsha kunangaphambili.
Ikusasa lempumelelo yomsebenzi ngeke lithembele 'kumaqhawe' noma ebhizinisini elilodwa. Funda ukuthi kungani ikusasa limayelana nokuthi 'thina' nokuthi ungakha kanjani isiko lokuqamba okulungele ushintsho.
Bhuka manje for 50% off
Ungayithola Kanjani Futhi Futhi Ugcine Ithalente Eliphezulu Manje Nakusasa Lomsebenzi
Enye yezinkinga ezinkulu ezibhekene namabhizinisi njengamanje ukuthola kwayo kanye nokugcina abantu abalungile. Iqiniso ngukuthi izindlela zakudala zokuthumela imisebenzi, ukuqasha abantu imisebenzi futhi ngethemba lokuthi abantu bazonamathela ezingasasebenzi.
Ungaba Kanjani Umholi Woguquko Ofaka Nokubandakanya Amaqembu
Ubuholi beNguquko bugxile ezintweni zokuguqulwa kwesiko. Kukhona ubuholi bendabuko 4 'I's of Transfformal Leadership esizosebenzisa isikhathi kuyo kulo lonke lolu hlelo.
Ikusasa Labiwe - Ungawakha Kanjani Amasiko Wobuholi Owabelwe Emsebenzini
Ubuholi okwabiwe ngabo yisiko. Kunezinhloso ezabiwe, ukuphendula okwabiwe kanye nokubonwa okwabiwe. Kuyisiko lobubhalo, ukuqamba izinto ezintsha nokusebenzisana. Yithathe njengenguqulo ephakeme yokusebenza ngokubambisana.
Ungakuhola kanjani ku-Shintsha i-VS Phatha uguquko ukuze wakhe ikusasa lomsebenzi
Shintsha amakhono obuholi abalulekile emsebenzini wokude nokushintsha indawo yomsebenzi ngokushesha.
Ungahola Kanjani Esikhathini Esizayo Somsebenzi - Unesihloko Noma Unaso
Ikusasa lomsebenzi manje! Ikusasa liyabiwa futhi lidinga ukuthi wonke umuntu akhe amakhono ayisisekelo obuholi kungakhathalekile ukuthi ungubani
Ucwaningo Olungasetshenziselwe Ucwaningo olwenziwe ngezifiso olwakho
Ukutholakala kwezitifiketi zokufundwa kwe-infographics zokulanda amathuluzi okufunda
Finyelela usebenzisa noma iyiphi insiza 24 / 7 365 Izinsuku ngonyaka
Amanani entandokazi nangaphambi kokubhaliswa komugqa weMicimbi ye-Live NextMiling ™
Ukubuyekezwa okubalulekile okuzomenywa ukuthi uzofaka isicelo sezinhlelo ezizayo ze-NextMiling ™
Ukutholakala kwama-Podcasts e-Hot Topic Webinars nanoma yiziphi ezinye izehlakalo eziku-inthanethi
Ukutholakala kwephaneli yethu yomhlaba wonke yochwepheshe Izingxoxo neminikelo yabo engavamile
Ikhophi yamahhala ye-eBook, "Ubuholi Mastery ku-Digital Age"
Ukufinyelela okungenamkhawulo kukho konke okuqukethwe okukhona nokusha kwezinyanga ze-6!
Ama-Free Course Transcriptions
Umqeqeshi Wakho Wokusebenza Komuntu Ukhethiwe futhi wabelwe isikhathi sakho sesifundo
I-3 eyenzelwe umuntu ihora elilodwa lokufundisa amakholi esifundweni ngasinye
Okomuntu uqobo ekusebenzeni komsebenzi wokuqukethwe; abaqeqeshi bazoxoxa ngesimo sakho esiyingqayizivele
Ukubhaliswa okubaluleke kakhulu kwezifundo zethu ezintsha eziku-inthanethi ngekusasa lomsebenzi
Ukutholwa kokuqukethwe kwebhuku lezincomo ze-weblinks nokunye okuningi
Ngithole ukuthi lolu wuhlelo olukhulu lwabantu kunoma yiliphi izinga lenhlangano, elingagcini kulabo abasezingeni lobuholi bendabuko. ”
B. Wilkins, Ezokuxhumana ze-OmniTel
Thenga izifundo zamaqembu akho noma inkampani
Uma ufuna ukuhlinzeka ngokufinyelela ku-inthanethi ithimba lonke labangama-20 noma ngaphezulu noma ufuna ukukhuluma ngokulebula amhlophe izifundo zethu zenkampani yakho
Singajabulela ukukhuluma nawe ngamanani entandokazi.
Xhumana nathi ngamanani entengo
Yiba onqenqemeni oluholayo
Iyakhuthaza, iyafundisa, iyasebenzisana futhi ihlelwa ngokwezidingo zakho ezihlukile.
Umqeqeshi we-one-on-one ukuze uhambise amakhono akho ngokushesha.
Ukuqonda amasu nokucwaninga ukukhulisa ibhizinisi lakho.
Ukuqeqeshwa okwenziwe ngezifiso ukuthuthukisa amakhono abaholi namaqembu akho awadingayo.